သစ္စာလေးပါးတရား (သို့) ဓမ္မစင်္ကြာတရားတော် ~ Nge Naing
သစ္စာလေးပါးတရား (သို့) ဓမ္မစင်္ကြာတရားတော်
Friday, August 03, 2012 Nge Naing2comments
ဒီ လောကမှာ ဘယ်သူ့အတွက်မဆို မလွဲနိုင်တဲ့ အမှန်တရားဆိုတာ သစ္စာလေးပါးသာ ရှိပြီး သစ္စာလေးပါးကလွဲရင် ကျန်တာအားလုံးက တချို့အတွက် ဘယ်လောက်ပဲ မှန်နေပါစေ၊ တချို့အတွက်တော့ မှားနေတတ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သစ္စလေးပါးကလွဲရင် တခြား အမှန်တရားလို့ ပြောနေတာတွေ အားလုံးဟာ အမှန်တရား ဧကန်စင်စစ်မဟုတ်ဘဲ ကာလံ၊ ဒေသံ၊ အခြေအနေ အချိန်အခါနဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ သတ္တ၀ါတွေရဲ့ နှစ်သက်သဘောကျမှု၊ လိုက်လျောညီထွေမှုအပေါ် မူတည်ပြီး ပညတ်ထားတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေသာ ဖြစ်ပြီး သစ္စာလေးပါးသာလျှင် အားလုံးအတွက် အမှန်တရား ဖြစ်ကြောင်း လေ့လာ သိရှိရပါတယ်။ ဓမ္မစင်္ကြာ တရားတော်မြတ်ဟာ သစ္စာလေးပါးတရားကို မြတ်စွာဘုရားက သူဘုရားဖြစ်ပြီး နှစ်လအကြာမှာ ပဉ္စ၀ဂ္ဂီငါးပါးကို ပထမဦးဆုံး ဟောတော်မူတဲ့ တရားဦးဖြစ်သလို ဗုဒ္ဓတရားတော် အားလုံးရဲ့ အနှစ်ချုပ်လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီတရားတော်ရဲ့ မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းကို အရှင်အာနန္ဒာက သူကြားသိခဲ့ရတဲ့အတိုင်း တခြားသော သံဃာတော်တွေကို ပြန်လည်ပြောကြားထားခြင်း ဖြစ်တယ်။
မြတ်စွာဘုရားဟာ ဓမ္မစင်္ကြာတရားကို တိရိစ္ဆာန်တွေကို ဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့ မိဂဓါရုံတောထဲမှာ သူအရင်က ဘယ်တုန်းကမှ မသိခဲ့ဘဲ အခုမှ သိလာရတဲ့ တရားတွေကို ဟောပြပါမယ်ဆိုပြီး ပဉ္စ၀ဂ္ဂီငါးဦးကို ၀ါဆိုလပြည့်နေ့မှာ ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ အယုတ်တရားနှစ်ပါးအကြောင်းကို စတင်ဟောပြပါတယ်။ ကာမသုခလ္လိကာ နုယောဂေါ ခေါ် အပျော်အပါး လွန်ကဲစွာ လိုက်စားခြင်း အပါအ၀င် ကာမဂုဏ်အာရုံမှာ အလွန်အကျူး ခံစားခြင်းနှင့် အတ္တကိလမထာ နုယောဂေါခေါ် မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို ညှင်းဆဲပြီး ကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်း ဆိုတဲ့ အယုတ်တရား နှစ်ပါးဟာ သတ္တ၀ါတွေအတွက် ဘာအကျိုးကျေးဇူးမှ မရှိဘဲ ဒုက္ခဆင်းရဲတွင်းကိုသာ ရောက်စေတတ်တဲ့ အစွန်းရောက်တဲ့ တရားနှစ်ပါး ဖြစ်တယ်လို့ ဘုရားက ဓမ္မစင်္ကြာတရားမှာ ပထမဦးစွာ ဟောပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားက ဒီလို အစွန်းနှစ်ဘက်က လွတ်အောင် ရှောင်လို့ ရနိုင်သော တရားဖြစ်တဲ့ မစ္ဈိမပဋိပဋာခေါ် အမြတ်တရား (သို့) အလည်အလတ်ကျင့်စဉ်တရား ဆိုတာလည်း အမှန်တကယ်ပင် ရှိပြီး ဒီအလည်အလတ်ကျင့်စဉ်ကသာလျှင် ဒုက္ခအပေါင်းမှ လွတ်မြောက်နိုင်သော တရားဖြစ်ကြောင်း ဟောပါတယ်။ အလယ်အလတ် တရားဆိုတာတွေကတော့ သမ္မာဒိဋ္ဌိ (မှန်ကန်သော အမြင်) သမ္မာသင်္ကပ္ပေါ (မှန်သော အကြံအစည်) သမ္မာဝါစာ (မှန်သောပြောဆိုမှု)၊ သမ္မာကမ္မန္တော (မှန်ကန်သော ပြုကျင့်မှု)၊ သမ္မာအာဇီဝေါ (မှန်သော အသက်မွေးမှု)၊ သမ္မာဝါယာမော (မှန်သော အားထုတ်မှု)၊ သမ္မာသတိ (မှန်သော သတိ)၊ သမ္မာသမာဓိ (မှန်သော စူးစိုက်မှု) လို့ခေါ်တဲ့ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးနောက်မှာတော့ မြတ်စွာဘုရားက သစ္စာလေးပါးတရားမှာ တပါးစီရဲ့ အခြေခံအချက်တွေကို ဆက်ဟောပါတယ်။
(၁) ဒုက္ခသစ္စာ။ ။သတ္တ၀ါတွေ အားလုံးဟာ အပေါ်မှာ ပြောထားတဲ့ အယုတ်တရား နှစ်ပါးကြောင့် ဒုက္ခသံသရာနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ပဋိသန္ဓေနေရခြင်း၊ အိုခြင်း၊ နာခြင်း သေခြင်းမကင်းတဲ့ ဘ၀၊ ချစ်သူနဲ့ ကွေကွင်းရခြင်း မချစ်မနှစ်သက်သူနဲ့ ပေါင်းဖက်ရခြင်းတွေဟာ ဆင်းရဲခြင်း ဒုက္ခသစ္စာအမှန် ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) သမုဒယသစ္စာ။ ။ ကာမဂုံအာရုံတွေကို နှစ်သက်တပ်မက်ခြင်း၊ ဘ၀ကို လိုချင်တပ်မက်ခြင်း၊ စွဲလန်းခြင်း သံယောစဉ် အနှောင်အဖွဲ့မှန်သမျှဟာ သတ္တ၀ါတွေမှာ ရှိတဲ့ သမုဒယတွေ ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ဟာ ဒုက္ခကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းဖြစ်တဲ့ သမုဒယ သစ္စာအမှန် ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) နိရောဓသစ္စာ။ ။အရိယသူတော်စင်အကျင့်ကို ကျင့်သူတွေအတွက် ဒုက္ခခပ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာ၊ သမုဒယဆိုတဲ့ လိုချင်တပ်မက်မှု တဏှာကုန်ဆုံးရာ နေရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာ အမှန်ရှိပါတယ်။ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ငြိမ်းအေးခြင်း နိရောဓသစ္စာအမှန် ဖြစ်ပါတယ်။
(၄)မဂ္ဂသစ္စာ။ ။ ဒုက္ခအပေါင်းက လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက် သမုဒယကို အဆုံးသတ်သည့်နေရာ နိဗ္ဗာန်ကို သွားတဲ့ နည်းလမ်းလည်း အမှန်ရှိပါတယ်။ အပေါ်မှာ ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ မစ္ဈိမပဋိပဋာခေါ် သမ္မာဒိဋ္ဌိ (မှန်ကန်သော အမြင်) သမ္မာသင်္ကပ္ပေါ (မှန်သော အကြံအစည်) သမ္မာဝါစာ (မှန်သောပြောဆိုမှု)၊ သမ္မာကမ္မန္တော (မှန်သော ပြုကျင့်မှု)၊ သမ္မာအာဇီဝေါ (မှန်သော အသက်မွေးမှု)၊ သမ္မာဝါယာမော (မှန်သော အားထုတ်မှု)၊ သမ္မာသတိ (မှန်သော သတိ)၊ သမ္မာသမာဓိ (မှန်သော စူးစိုက်မှု) ဒီရှစ်ပါးလမ်းစဉ်က ဒုက္ခကလွတ်မြောက်ရာ နည်းလမ်း မဂ္ဂသစ္စာအမှန် ဖြစ်ပါတယ်။
သစ္စာလေးပါးက ဘာတွေလဲဆိုတာကို ဟောပြီးတဲ့နောက် သစ္စာလေးပါးမှာ တပါးစီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်ပေါ်တဲ့ ညာဏ်သုံးပါးစီကို ရှေးယခင်က ဘယ်တုန်းကမှ မသိခဲ့ဖူးသော အရိယသစ္စာတရားတို့ကို အခုသိရပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောပြီး အကျယ်ထပ်ဟောပါတယ်။ သစ္စာညာဏ်ခေါ် သစ္စာလေးပါးရဲ့ သဘောသဘာဝကို အမှန်အတိုင်း ထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့ညာဏ်၊ ကိစ္စညာဏ်ခေါ် သစ္စာလေးပါးကို ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်အကုန်အစင် ပြီးစီးခဲ့ပြီးတဲ့ညာဏ်၊ ကတညာဏ်ခေါ် သစ္စာလေးပါးကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန် ပြန်လည်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးသည့်ဥာဏ် စတဲ့သစ္စာတပါးစီရဲ့ ညာဏ်သုံးခုစီကို ပညာမျက်စိ (စက္ခုံ ဥဒပါဒီ)၊ အသိဉာဏ်(ဉာဏံဥဒပါဒိ) ၊ 'ပညာဉာဏ် (ပညာဥဒပါဒိ)၊ ထိုးထွင်းဉာဏ် 'ဝိဇ္ဇာ' (၀ိဇ္ဇာဥဒပါဒိ)၊ အလင်းရောင် (အာလောကာ ဥဒပါဒိ) စသည့်တို့ဖြင့် အထင်အရှား ဖြစ်ပေါ်ပြီး သိခဲ့ရကြောင်း ဟောကြားပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားဟာ သစ္စာလေးပါးတရားကို မသိခင်က သူ့ကိုယ်သူ သဗ္ပညုတ ဥာဏ်တော်ရှင်အဖြစ် ဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ကြောင်း အပေါ်မှာ ပြောထားတဲ့ သစ္စလေးပါးကို ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာကို သိပြီး၊ အားထုတ်ပြီး ပိုင်ခြားထင်ထင် သုံးသပ်နိုင်ပြီးမှသာ ဘုရားဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖေါ်ပြောခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ပဉ္စ၀ဂ္ဂီငါးပါးကို ပြောပြပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားအကျမှာတေ့ာ ပဉ္စ၀ဂ္ဂီ ငါးပါးဟာ သစ္စာလေးပါးတရားကို အလွန်ပဲ နှစ်သက်သဘောကျပြီး ရဟန်းတပါးဖြစ်တဲ့ အရှင်ကောဏ္ဍညဟာ ဓမ္မစင်္ကြာတရားအဆုံးမှာ ချက်ချင်း သောတာပန်တည်သွားပြီး အရိယာ ဘ၀ကို ရောက်သွားလုိ့ သြကာသ ဘုရားရှိခိုးမှာ ဆိုနေတဲ့ အပယ်လေးပါးကို သွားတဲ့တံခါးကို ပိတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။ (ဓမ္မစင်္ကြာထဲမှာ မပါပေမဲ့ ကျန်တဲ့ ရဟန်းတွေကတော့ နောက်နေ့ အနတ္တလက္ခဏာသုတ်ကို ဟောတဲ့အချိန် သောတာပန်တည်တယ်လို့ သိရပါတယ်)။ ဓမ္မစင်္ကြာတရားအပြီးမှာ အရှင်ကောဏ္ဍည သောတာပန်တည်သွားတာနဲ့ မြတ်စွာဘုရားက ၀မ်းသာအားရနဲ့ ကောတဏ္ဍညတရား သိသွားပြီ အပယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မရှိနိုင်တော့ဘူး၊ ကောတဏ္ဍညအတွက် အပယ်တံခါးပိတ်သွားပါပြီလို့ ဥဒါန်းကျူးရင့်ပါတယ်။
ဒါကတော့ အရှင်အာနန္ဒာ ပြန်ပြောပြထားတဲ့ ဓမ္မစင်္ကြာတရား အတိုချုပ်ဖြစ်ပြီး မြတ်စွာဘုရား ၄၅ ၀ါပတ်လုံး ဟောလာတဲ့ တရားအားလုံးရဲ့ အနှစ်ချုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တာတွေကတေ့ ဘ၀သံသရာက လွတ်မြောက်နိုင်ရန်အတွက် သစ္စာလေးပါးရဲ့ သဘောသဘာဝတွေကို ကိုယ်၊ နှုတ်၊ နှလုံးသုံးပါးနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် သိရှိနားလည် ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက် အထောက်အကူပြုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေသာ ဖြစ်တယ်။
မြတ်စွာဘုရား ဓမ္မစင်္ကြာတရားကို ဟောတော့ ကမ္ဘာလောကကြီးတခုလုံးလည်း အလင်းရောင်တွေ ဖြာထွက်လာပြီး ဘုမ္မစိုးနတ်တွေကစပြီး လူ့ပြည်မှာ ဘုရားပွင့်ပြီဖြစ်ကြောင်းကို စတင်ဟစ်ကြွေးပြီး ကောင်းချီသြဘာပေးကြရာကနေ နတ်တွေဗြဟ္မာတွေ အဆင့်အဆင့်ကြားကြပြီး စတုမာရစ်ကနေ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်လုံးနဲ့ ဗြဟ္မာပြည်အထိ အသီးသီးက လူ့ပြည်က သားရဲတိရိစ္ဆာန်တွေကို ဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့ မိဂဒါရုံတောမှာ မြတ်စွာဘုရားက သစ္စလေးပါးတရားကို ဟောတောမူနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကောင်းချီးသြဘာ ပေးကြကြောင်း ဓမ္မစင်္ကြာသုတ်ထဲမှာ ပါရှိပါတယ်။
အောက်မှာဓမ္မာစင်္ကြာ ပါဠိနဲ့ မြန်မာပြန်ကို ကူးယူဖေါ်ပြထားတာကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဓမ္မစင်္ကြာ ပါဠိကို ကျွန်မနဲ့အတူ လိုက်ရွတ်ပြီး ကုသိုလ်ပြုနိုင်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ သာသနာ ရောင်ဝါနေသို့ လင်းစေသော်
ဓမ္မစကြာ ပါဠိတော်နှင့် မြန်မာပြန်
(စာသားကို ဒီနေရာက ကူးယူဖေါ်ပြပြီး ပါဠိနဲ့ မြန်မာလိုကြား ဘာသာပြန် ကြည့်လို့လွယ်အောင် နံပါတ်တွေ တပ်ပေးပြီး အနည်းငယ် ပြန်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ )
မြတ်စွာဘုရားသည် ဗာရာဏသီပြည် ဣသိပတန မိဂါဝုန်တော၌ ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်-
၁။ ( နိဒါန်း )
၂။ ( မမှီဝဲသင့်သော အဖို့အစွန်း ၂-ပါး )
၃။ ( မဇ္ဈိမ ပဋိပဒါနှင့် ယင်း၏အကျိုး )
၄။ ( ဒုက္ခသစ္စာ )
၅။ ( သမုဒယသစ္စာ )
၆။ ( နိရောဓသစ္စာ )
၇။ ( မဂ္ဂသစ္စာ )
၈။ ( ဒုက္ခသစ္စာ၌ သစ္စဉာဏ် )
၉။ ( ဒုက္ခသစ္စာ၌ ကိစ္စဉာဏ် )
၁၀။ ( ဒုက္ခသစ္စာ၌ ကတဉာဏ် )
၁၁။ ( သမုဒယသစ္စာ၌ သစ္စဉာဏ် )
၁၂။ ( သမုဒယသစ္စာ၌ ကိစ္စဉာဏ် )
၁၃။ ( သမုဒယသစ္စာ၌ ကတဉာဏ် )
၁၄။ ( နိရောဓသစ္စာ၌ သစ္စဉာဏ် )
၁၅။ ( နိရောဓသစ္စာ၌ ကိစ္စဉာဏ် )
၁၆။ ( နိရောဓသစ္စာ၌ ကတဉာဏ် )
၁၇။ ( မဂ္ဂသစ္စာ၌ သစ္စဉာဏ် )
၁၈။ ( မဂ္ဂသစ္စာ၌ ကိစ္စဉာဏ် )
၁၉။ ( မဂ္ဂသစ္စာ၌ ကတဉာဏ် )
၂၀။ ( ဘုရားအဖြစ် ဝန်မခံတော်မူခဲ့သေးပုံ )
၂၁။ ( ဘုရားအဖြစ် ဝန်ခံတော်မူပုံ )
၂၂။ ( ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ်ဖြင့် သိမြင်ပုံ )
၂၃။ ( ပဉ္စဝဂ္ဂီတို့နှစ်သက်ကြပုံ )
၂၄။ ( အရှင်ကောဏ္ဍည တရားထူးရပုံ )
၂၅။ ( နတ်ဗြဟ္မာတို့ ကောင်းချီးပေးပုံ )
(အသံဖိုင်မှာတော့ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်က ကောင်းချီးပေးပုံကို တထပ်စီအတွက် ထပ်ခါထပ်ခါ မဆိုတော့ဘဲ တခါပဲဆိုပြီး အတိုချုပ်ထာပါတယ်။)
၂၆။ ( မြေငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ အရောင်အလင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်း )
၂၇။ ( မြတ်စွာဘုရား ဥဒါန်းကျူးတော်မူပုံ )
ရဟန်းတို့ မြတ်စွာဘုရားသည် အထူးသဖြင့် သိတော်မူအပ်သော ပညာမျက်စိကို ပြုတတ်သော ဉာဏ်အမြင်ကို ပြုတတ်သော အလယ်အလတ်ဖြစ်သော ဤမြတ်သော အကျင့်သည် ကိလေသာ ငြိမ်းရန် အလို့ငှါ ဖြစ်၏၊ ထူးသော ဉာဏ်ဖြင့် သိရန် အလို့ငှါ ဖြစ်၏၊ (သစ္စာလေးပါးကို) သိရန် အလို့ငှါ ဖြစ်၏၊ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုရန် အလို့ငှါ ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့ ဤသည်ကား
ဆင်းရဲဖြစ်သော အရိယာတို့၏ အမှန်တရားတည်း။ ပဋိသန္ဓေ တည်နေရခြင်းသည်လည်း ဆင်းရဲ၏၊ အိုရခြင်းသည်လည်း ဆင်းရဲ၏၊ နာရခြင်းသည် လည်း ဆင်းရဲ၏၊ သေရခြင်းသည်လည်း ဆင်းရဲ၏၊ မချစ်သော သူတို့နှင့် အတူနေရခြင်းသည်လည်း ဆင်းရဲ၏၊ ချစ်သော သူတို့နှင့် ကွေကွင်းရခြင်းသည်လည်း ဆင်းရဲ၏၊ လိုချင်ရာကို မရခြင်းသည်လည်း ဆင်းရဲ၏၊ အကျဉ်းအားဖြင့် စွဲလမ်းရာ အာရုံဖြစ်သော ခန္ဓာငါးပါးတို့သည်လည်း ဆင်းရဲကုန်၏။ (၁)
ရဟန်းတို့ ''ဤတရားသည် ဆင်းရဲဖြစ်သော အရိယာတို့၏ အမှန်တရားမည်၏'' ဟု (ဘုရား မဖြစ်မီ) ရှေးက မကြားဖူးကုန်သော (ဒုက္ခသစ္စာ) တရားတို့၌ ငါဘုရားအား ပညာမျက်စိသည် ထင်ရှား ဖြစ်၏၊ အသိဉာဏ်သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အပြားအားဖြင့် သိတတ်သော ဉာဏ် 'ပညာ' သည် ထင်ရှား ဖြစ်၏၊ ထိုးထွင်း၍ သိသော ဉာဏ် 'ဝိဇ္ဇာ' သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အလင်းရောင်သည် ထင်ရှားဖြစ်၏။
ရဟန်းတို့ ''ထိုဆင်းရဲဖြစ်သော အရိယာတို့၏ အမှန်တရားကို ပိုင်းခြား၍ သိထိုက်၏'' ဟု (ဘုရားမဖြစ်မီ) ရှေးက (မကြားဖူးကုန်သော ဒုက္ခသစ္စာတရားတို့၌) ငါဘုရားအား ပညာမျက်စိသည် ထင်ရှား ဖြစ်၏၊ အသိဉာဏ်သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အပြားအားဖြင့် သိတတ်သော ဉာဏ် 'ပညာ' သည် ထင်ရှား ဖြစ်၏၊ ထိုးထွင်း၍ သိသော ဉာဏ် 'ဝိဇ္ဇာ' သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အလင်းရောင်သည် ထင်ရှားဖြစ်၏။
ရဟန်းတို့ ''ထိုဆင်းရဲ ဖြစ်သော အရိယာတို့၏ အမှန်တရားကို ပိုင်းခြား၍ သိခဲ့ပြီ'' ဟု (ဘုရား မဖြစ်မီ) ရှေးက မကြားဖူး ကုန်သော (ဒုက္ခသစ္စာ) တရားတို့၌ ငါဘုရားအား ပညာမျက်စိသည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အသိဉာဏ်သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အပြားအားဖြင့် သိတတ်သော ဉာဏ် 'ပညာ' သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ ထိုးထွင်း၍ သိသော ဉာဏ် 'ဝိဇ္ဇာ' သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အလင်းရောင်သည် ထင်ရှား ဖြစ်၏။ (၁)
ရဟန်းတို့ ''ဤတရားသည် ဆင်းရဲခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်သော အရိယာတို့၏ အမှန်တရား မည်၏''ဟု (ဘုရားမဖြစ်မီ) ရှေးက မကြားဖူးကုန်သော (သမုဒယသစ္စာ) တရားတို့၌ ငါဘုရားအား ပညာမျက်စိသည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အသိဉာဏ်သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အပြားအားဖြင့် သိတတ်သော ဉာဏ် 'ပညာ'သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ ထိုးထွင်း၍ သိသော ဉာဏ် 'ဝိဇ္ဇာ' သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အလင်းရောင်သည် ထင်ရှားဖြစ်၏။
ရဟန်းတို့ ''ထိုဆင်းရဲခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်သော အရိယာတို့၏ အမှန်တရားကို ပယ်အပ်၏'' ဟု (ဘုရားမဖြစ်မီ) ရှေးက (မကြားဖူးကုန်သော သမုဒယသစ္စာတရားတို့၌) ငါဘုရားအား ပညာမျက်စိသည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အသိဉာဏ်သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အပြားအားဖြင့် သိတတ်သော ဉာဏ် 'ပညာ'သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ ထိုးထွင်း၍ သိသော ဉာဏ် 'ဝိဇ္ဇာ' သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အလင်းရောင်သည် ထင်ရှားဖြစ်၏။
ရဟန်းတို့ ''ထိုဆင်းရဲခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်သော အရိယာတို့၏ အမှန်တရားကို ပယ်ပြီးပြီ'' ဟု (ဘုရားမဖြစ်မီ) ရှေးက မကြားဖူးကုန်သော (သမုဒယသစ္စာ) တရားတို့၌ ငါဘုရားအား ပညာမျက်စိသည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အသိဉာဏ်သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အပြားအားဖြင့် သိတတ်သော ဉာဏ်'ပညာ' သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ ထိုးထွင်း၍ သိသော ဉာဏ် 'ဝိဇ္ဇာ' သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အလင်းရောင်သည် ထင်ရှားဖြစ်၏။ (၂)
ရဟန်းတို့ ''ဤတရားသည် ဆင်းရဲ၏ ချုပ်ရာဖြစ်သော အရိယာတို့၏ အမှန်တရားမည်၏'' ဟု (ဘုရားမဖြစ်မီ) ရှေးက မကြားဖူးကုန်သော (နိရောဓသစ္စာ) တရားတို့၌ ငါဘုရားအား ပညာမျက်စိသည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အသိဉာဏ်သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အပြားအားဖြင့် သိတတ်သော ဉာဏ် 'ပညာ' သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ ထိုးထွင်း၍ သိသော ဉာဏ် 'ဝိဇ္ဇာ' သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အလင်းရောင်သည် ထင်ရှား ဖြစ်၏။
ရဟန်းတို့ ''ထိုဆင်းရဲ၏ ချုပ်ရာဖြစ်သော အရိယာတို့၏ အမှန်တရားကို မျက်မှောက် ပြုအပ်၏''ဟု (ဘုရားမဖြစ်မီ) ရှေးက (မကြားဖူးကုန်သော နိရောဓသစ္စာတရားတို့၌) ငါဘုရားအား ပညာမျက်စိသည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အသိဉာဏ်သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အပြားအားဖြင့် သိတတ်သော ဉာဏ် 'ပညာ' သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ ထိုးထွင်း၍ သိသော ဉာဏ် 'ဝိဇ္ဇာ' သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အလင်းရောင်သည် ထင်ရှားဖြစ်၏။
ရဟန်းတို့ ''ထိုဆင်းရဲ၏ ချုပ်ရာဖြစ်သော အရိယာတို့၏ အမှန်တရားကို မျက်မှောက်ပြုပြီးပြီ'' ဟု (ဘုရားမဖြစ်မီ) ရှေးက မကြားဖူးကုန်သော (နိရောဓသစ္စာ) တရားတို့၌ ငါဘုရားအား ပညာမျက်စိသည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အသိဉာဏ်သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အပြားအားဖြင့် သိတတ်သော ဉာဏ် 'ပညာ' သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ ထိုးထွင်း၍ သိသော ဉာဏ် 'ဝိဇ္ဇာ' သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အလင်းရောင်သည် ထင်ရှားဖြစ်၏။
ရဟန်းတို့ ''ဤတရားသည် ဆင်းရဲချုပ်ရာ (နိဗ္ဗာန်) သို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်ဖြစ်သော အရိယာတို့၏ အမှန်တရားမည်၏'' ဟု (ဘုရားမဖြစ်မီ) ရှေးက မကြားဖူးကုန်သော (မဂ္ဂသစ္စာ) တရားတို့၌ ငါဘုရားအား ပညာမျက်စိသည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အသိဉာဏ်သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အပြားအားဖြင့် သိတတ်သော ဉာဏ် 'ပညာ' သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ ထိုးထွင်း၍ သိသော ဉာဏ် 'ဝိဇ္ဇာ' သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အလင်းရောင်သည် ထင်ရှားဖြစ်၏။
ရဟန်းတို့ ''ထိုဆင်းရဲချုပ်ရာ (နိဗ္ဗာန်) သို့ရောက်ကြောင်း အကျင့်ဖြစ်သော အရိယာတို့၏ အမှန်တရားကို ပွားများအပ်၏'' ဟု (ဘုရားမဖြစ်မီ) ရှေးက (မကြားဖူး ကုန်သော မဂ္ဂသစ္စာ တရားတို့၌) ငါဘုရားအား ပညာမျက်စိသည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အသိဉာဏ်သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အပြားအားဖြင့် သိတတ်သော ဉာဏ် 'ပညာ' သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ ထိုးထွင်း၍ သိသော ဉာဏ် 'ဝိဇ္ဇာ' သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အလင်းရောင်သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊
ရဟန်းတို့ ''ထိုဆင်းရဲချုပ်ရာ (နိဗ္ဗာန်)သို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်ဖြစ်သော အရိယာတို့၏ အမှန်တရားကို ပွားများပြီးပြီ'' ဟု (ဘုရားမဖြစ်မီ) ရှေးက မကြားဖူးကုန်သော (မဂ္ဂသစ္စာ) တရားတို့၌ ငါဘုရားအား ပညာမျက်စိသည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အသိဉာဏ်သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အပြားအားဖြင့် သိတတ်သောဉာဏ် 'ပညာ' သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ ထိုးထွင်း၍ သိသော ဉာဏ် 'ဝိဇ္ဇာ' သည် ထင်ရှားဖြစ်၏၊ အလင်းရောင်သည် ထင်ရှားဖြစ်၏။ (၄)
ရဟန်းတို့ ''ဤအရိယာတို့၏ အမှန်တရားလေးပါးတို့၌ ဤသို့ သုံးပါးသော အပြန် တစ်ဆယ့်နှစ်ပါးသော အခြင်းအရာရှိသော မှန်ကန်သော ဉာဏ်အမြင်သည် စင်ကြယ်လာသော အခါ၌သာလျှင် ငါသည် နတ် မာရ်နတ် ဗြဟ္မာနှင့်တကွသော နတ်လောကနှင့် သမဏဗြာဟ္မဏ မင်းများ လူများနှင့်တကွသော လူ့လောက၌ အတုမရှိသော အလုံးစုံသော တရားတို့ကို ကိုယ်တိုင်မှန်စွာ သိသော (အရဟတ္တမဂ်) ဉာဏ်ကို သိပြီဟု ဝန်ခံခဲ့၏၊
ငါ၏ (ကိလေသာတို့မှ) လွတ်မြောက်မှုသည် မပျက်စီးနိုင်ပြီ၊ ဤကား အဆုံးစွန်သော ဘဝတည်း၊ ယခုအခါ ဘဝသစ်၌ ဖြစ်ခြင်း မရှိတော့ပြီဟု ငါ့အား ပစ္စဝေက္ခဏာ ဉာဏ်အမြင်သည် ဖြစ်ပေါ်လာ၏။
မြတ်စွာဘုရားသည် ဤစကားကို မိန့်တော်မူ၏၊ ပဉ္စဝဂ္ဂီငါးပါး ရဟန်းတို့သည် နှစ်လိုကုန်သည် ဖြစ်၍ မြတ်စွာဘုရား၏ တရားတော်ကို ဝမ်းမြောက်စွာ ခံယူကြလေကုန်၏။
ဤသို့လျှင် ထိုအချိန် ထိုအခါ ထိုကာလတွင် အကနိဋ္ဌဗြဟ္မာ့ပြည် တိုင်အောင် ကောင်းချီးသံသည် ပြန့်နှံ့၍ တက်၏၊
ဤတစ်သောင်းသော လောကဓာတ်သည်လည်း တုန်လှုပ်၏၊ ပြင်းစွာ တုန်လှုပ်၏၊ ထက်ဝန်းကျင် တုန်လှုပ်၏၊ အတိုင်းအရှည်မရှိ ကြီးမားသော အရောင်အလင်းသည်လည်း လောက၌ နတ်တို့၏ အာနုဘော်ကို ကျော်လွန်၍ ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၏။
Posted in: ABSDF တောတွင်းဘ၀ပုံရိပ်,ဘာသာရေး
August 3, 2012 at 9:47 AM Reply
Thanksalot Ma Nae Naing. This isavery useful post not only for me, but also for my kid as I can explain to them. I will also try to read it. Thanks again.
August 3, 2012 at 8:41 PM Reply